How Sneeze Particles Travel Inside An Airplane [Simulation]
Why no one should be traveling inaplane during this time:
Simulation technology shows why you should sit very far behindasick passenger. Researchers at the FAA Center of Excellence at Purdue University created thi...
Young Engineers in ASHRAE put the “happy” in Happy Hour yesterday by featuring “Some Good ASHRAE News”, an ASHRAE spin on the popular news cast web series. Members shared their good news in one word to formaword cloud highlighting the good (and humor) in the ASHRAE global community. ashrae.org/2020virtual ... See more
အဆောက်အဦးများတွင်လူများသက်တောင့်သက်သာနေထိုင်နိုင်ရန်အောက်ပါ ၆ ချက်များအပေါ်မူတည်ပါသည်။
ACMV အလုပ်များသည်ပထမ ၂ ချက်ကိုအဓိကသက်ရောက်စေပြီး noise control ဖြင့် အချက် ၃ (acoustical environment) ကိုသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။
အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္လူမ်ားသက္ေတာင္႔သက္သာေနထိုင္ႏိုင္ရန္ေအာက္ပါ ၆ ခ်က္မ်ားအေပါ္မူတည္ပါသည္။
ACMV အလုပ္မ်ားသည္ပထမ ၂ ခ်က္ကိုအဓိကသက္ေရာက္ေစျပီး noise control ျဖင္႔ အခ်က္ ၃ (acoustical environment) ကိုသက္ေရာက္မွုရွိႏိုင္ပါသည္။ ... See more
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ကိုဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်အပ်ပါသည်။ ... See more
Managing COVID 19 and HVAC in Buildings for Emerging Economies
ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ COVID-19 နွင္႔အေဆာက္အဦး HVAC ထိမ္းသိမ္းေရးနွင္႔ပတ္သက္ေသာ webinar ေလးကို မွ်ေဝအပ္ပါသသည္။
ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် COVID-19 နှင့်အဆောက်အဦး HVAC ထိမ်းသိမ်းရေးနှင့်ပတ်သက်သော webinar လေးကို မျှဝေအပ်ပါသသည်။
https://www.youtube.com/watch?v=GNl4eKgBrEM ... See more
This webinar aims to provide essential technical information to people of emerging economies to manage and tackle COVID-19 and its implications to HVAC syste...
Heat pump နဲ႔ပတ္သက္ျပီးအ ေျခခံ အခ်က္ေလးအခ်ိဳ႔ ကိုတင္ျပအပ္ပါသည္။
https://www.winteracmv.com/2020/06/16/heat-pump/ ... See more